Nke ụlọ ọrụ ịkwanyere sports n'ala dị mma? - China Shijiazhuang Yichen Plastic Ft
Ịkwanyere Sports flooring
Long-awụlikwa elu ute
Ịkwanyere Commercial flooring
Ịkwanyere Commercial Series na Solid Kwadoro
Ịkwanyere Commercial-ntụrụndụ Series
Ịkwanyere Wave Series
Ịkwanyere homogeneous Series
Eyi n'ijikọta Ngidi
Rubber flooring ute
Isiokwu Tenis flooring
Ụlọ akwụkwọ ọta akara play ebe
Nke ụlọ ọrụ ịkwanyere sports n'ala dị mma?
Ịkwanyere sports n'ala bụ ụdị n'ala mepụtara maka egwuregwu n'ala site na iji ịkwanyere Materials. Akpan, ọ na-emepụta site bechapu mkpuchi Usoro ma ọ bụ calendering mkpuchi, extruding ma ọ bụ pịa Usoro, na a na-aga n'ihu mpempe akwụkwọ mkpụrụ, iji ịkwanyere na ngalaba-polima resins dị ka isi ngwaọrụ wee tinye dịanyā, plasticizer, stabilizer, colorant na ndị ọzọ inyeaka ihe.
Mgbe ahụ nke ụlọ ọrụ ịkwanyere sports flooring bụ mma? The egwuregwu flooring nke Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Ft Co., Ltd nwere na-egbuke egbuke agba, ụkpụrụ doro anya na udidi, uzo oyi akwa na a ọma ikpehe antislip, ujo absorption, wdg The flooring mechaa akwụkwọ nke gburugburu ebe obibi-echebe, bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na eco -friendly ngwaahịa. Ọ nwere ike na-eji maka ebe na gburugburu ebe obibi-echebe chọrọ, dị ka elu na okporo ụzọ ebe dị ka ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ ọta akara, wdg Ọzọkwa, ịkwanyere flooring si echichi dị mfe na-adaba adaba. Naanị na onwe-leveling ihe, ọ ga-arụnyere, na a ga-enwe nnukwu mkpọtụ mmetọ n'oge echichi.
Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Ft Co., Ltd., dị ka a ọkachamara emeputa nke ịkwanyere sports flooring, nwere ike àgwà akara na elu mgbe-sales ọrụ, n'ịhụ na bụla ahịa na-enweta a ruru eru ngwaahịa.
Product Quality emesi obi ike: Anyị na ngwaahịa na-adịghị agba dị iche (otu ogbe), ji ajị anụ kpaa onu, Lotus akwukwo onu, ntopute, mkpumkpu ọkpụrụkpụ, isi na ndị ọzọ ezughị okè nsogbu. All Yichen ngwaahịa ga-kpọrọ na ruru eru akwụkwọ tupu ya ahapụ factory. Ọzọkwa na akwụkwọ ikike maka ngwaahịa onwe ya bụ 6 afọ (elu ọgwụgwụ), 2 afọ nkịtị mma. (Ma e wezụga ndị pụrụ iche ahaziri ngwaahịa na àgwà Mbelata mere site ojiji, echichi, ogbenye mmezi.)
Main ngwaahịa nke Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Ft Co., Ltd: plastic n'ala, ịkwanyere flooring, egwuregwu flooring, UV usoro flooring, homogeneous etc flooring. Anyị na ngwaahịa na-abụghị nanị nabatara na anụ ụlọ ahịa, kamakwa oversea ahịa. Yichen n'ala nwere nnọọ ezi aha na okwukwe na ezi nkwado na anyị anụ ụlọ na esenidụt ahịa na ngwaahịa mma, na ọrụ ma na mgbe-sales ọrụ, etc
Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Ft Co., Ltd
Olee otú ịhọrọ sports plastic FL ...
Taa plastic flooring bụ a ọhụrụ ụdị nke ìhè ahụ ji achọ ihe onwunwe n'ụwa nile. Ọ bụ nnọọ ewu ewu ...
Nke ụlọ ọrụ ịkwanyere egwuregwu ...
Ịkwanyere sports n'ala bụ ụdị n'ala mepụtara maka egwuregwu n'ala site na iji ịkwanyere Materials. Akpan, ọ bụ PR ...